जीवन शैली Archives - Nepal News Site
अधिकांश मानिस चिसो मौसममा धेरै बिरामी हुने गर्दछन् । जसमा पनि बालबालिका, वृद्धवृद्धाका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरुका लागि यो मौसम निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। जाडोयाममा रुघाखोकी, दम,जोर्नी दुखाइ, एलर्जी देखिनुका साथै आँखामा आँसु आउने, स्वर बस्नेजस्ता रोगले सजिलै आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले यो समयमा मानिस ...
काठमान्डौ : दिन–प्रतिदिन चिसो मौसम सुरु भईसकेको छ । चिसो मौसममा अझ बढी सक्रिय हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको कोरोना भाइरसले आम नेपालीको जनजीवन यत्तिबेला प्रभावित बनाईरहेको छ । त्यसैले, चिसो मौसममा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? जसका लागि जान्नुहोस् यी उपायहरु.... १. सम्पर्क सिमित मात्रमा गर्नूहोस् : अमेरि...
क्यान्सर जस्ता रोगबाट बच्न स्थानिय गाईको दहि दुध
परम्परादेखि पाल्दै आएको स्थानीय जातका गाईको गोरसबाट क्यान्सरजस्ता भयानक रोग ठीक हुने तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएपछि नेपालमा गाईप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेको छ । यसअघि स्थानीय गाईले कम दुध दिने भएकाले जर्सी गाई र भैँसी पाल्ने प्रचलन बढेको थियो । अमेरिका र युरोपेली देशमा स्थानीय गाईमाथि भएको वैज्ञानिक अनुसन्धान...
नियमित व्यायामका मानसिक फाइदा
व्यस्त जीवनशैलीका कारण अधिकांश मानिसले व्यायाममा ध्यान दिँदैनन् । यसले सबैभन्दा ठूलो असर निद्रामा पर्छ । हामी दिनभर काम गर्दा मस्तिष्क थाकिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै शारीरिक क्रियाकलाप नगर्दा स्टोमेनिया, स्लिप डिसअर्डरलगायतका समस्या निम्तिन्छन् । सामान्यतया योगा, हिँडाइ, डान्स, जिम, स्विमिङ वा अन्य शारी...
यी हुन् अम्बाका फाइदा
अम्बामा प्रशस्त मात्रामा आइरन र हेमोग्लोबिन पाइन्छ । आधा पाकेको अम्बाले पेटसम्बन्धी रोगका लागि फाइदा पुर्‍याउँछ । पाकेको अम्बाले तागत बढाउँछ । पेट सफा गर्न, दाँत बलियो बनाउन र भोक जगाउन अम्बाको सेवन राम्रो मानिन्छ । यसमा भिटामिनको मात्रा पनि प्रशस्त हुने भएकाले रोगसंग लड्ने क्षमता बढाउँछ । दम, खोकी र ग्यास...
स्वस्थ्य रहन दैनिक एउटा स्याउ
नियमित स्याउ खाँदा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने पैस्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ । यो हरेक मौसममा सजिलै उपलब्ध हुने स्वादिष्ट फल हो । खासगरी, ब्रेकफास्टमा स्याउ समावेश गर्नु राम्रो मानिन्छ । स्याउमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । स्याउमा पाइने यी पोषक तत्वले मानिसलाई निरोगी बन्न सघाउँछ । सा...
घरमै बसेर तौल घटाउने उपाय
आजकल अधिकांश मानिसमा मोटोपनाको समस्या देखिन्छ । शारीरिक व्यायामको कमी, असन्तुलित खानपान र गलत जीवनशैलीका कारण यस्तो समस्या बढिरहेको पाइन्छ । तौल घटाउन भन्दै विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जिम सेन्टर धाउने चलन छ । व्यस्त मानिसका लागि दैनिक जिम जानु झन्झटिलो पनि हुन सक्छ भने कतिपयका लागि खर्चिलो । यसर्थ, कुनै मेसिनको प्रयोगवि...
बालबालिका झगडा गरे भनेर मोबाईल, ल्यापटप दिनुहुन्छ ? यसले दृष्टि नै गुम्न सक्छ
काठमाडौं : सानै उमेरमा पावरवाला चश्मा लगाउनु पर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । बालकालमै त्यस्तो चश्मा लगाएको देख्दा हामी छक्क मान्छौं र सानो उमेरमा नै आँखा कमजोर हुनु हामीलाई असान्य लाग्छ । तर, नेपालमा हरेक दिन ७ जना बालबालिकाले आँखाको देख्ने क्षमता गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसमा बालबालिका भ...
गर्भावस्थामा गरिने योग
गर्भावस्था हरेक महिलाका लागि विशेष र जोखिमपूर्र्ण अवस्था हो । गर्भवस्थामा महिलाले विभिन्न समस्याको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भावस्थामा कतिपय महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न जटिलता देखापर्ने हुँदा स्वास्थ्यप्रति निकै नै सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । गर्भावस्थामा शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन पछिल्लो समयमा योेग गर्न ...